အခမဲ့နေ့ရက်များ၂ - ဗီဒီယိုစကားပြော№၁-ဗီဒီယိုချိန်းတွေ့နှင့်အတူမိန်းကလေးများအြန္လိုင္း
နှုတ်ခွန်းဆက်စကားအားလုံးမှအမျိုးသားအပေါ်များမှာ။ ငါခံစားခဲ့ရကောင်းအောင်အရသာသုပ်နှင့်ဟင်းချို၊နှင့်ကျွန်မအဲဒီလိုလုပ်ဖို့ကိုဆက်လက်။ အလုပ်အ ၃၅-၅၄ အသက်အနှစ်၊အဘယ်သူမျှမမကောင်းတဲ့အကျင့်၊လူတွေချစ်သောသူအိမ်မှာ၊ခရီးသွားခြင်းနှင့်အားကစားဆိုင်ရာ၊လိုသူတစ်ဘေးကင်းလုံခြုံနှင့်အဆင်ပြေလေထုအဘို့သင့်မိသားစု။ ငါတာဝန်ရှိသည်၊ယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်ဖော်ရွေ။ ငါဖြစ်၏တစ်ဦးရိုးသားပြီးအလုပ်ကြိုးစားသောအမျိုးသမီး။ ကျွန်မချက်ပြုတ်ဖို့ကိုချစ်နှင့်သင်အစေခံပါလိမ့်မယ်။ငါဖြစ်၏တစ်ဦးမေတ္တာနှင့်ဂရုစိုက်လူတစ်ဦး။ငါမေတ္တာအမျိုးသားများအတွက်၊ဘယ်မှာသင်ဖြုန်းနိုင်ပြီးထုထဲကသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘဝ၊ငြိမ်းချမ်းပြီးသဟဇာတဖြစ်။ ဒီဖန်ခွက်စပျစ်ရည်ကိုသောက်။ ဒါဟာရရှိနိုင်မယ့်အချိန်အထိအတွင်း။ သင်လိုအပ် လင္းအတိတ်ပြိုင်ပွဲ၊အလှအပ။ မထင်ကြဘူးအမူကြမ်းအဖြစ်တစ်တပ်၊မြည်း္၊မွဴးေ။ အားလုံးဆင်းရဲဒုက္ခနှင့်ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်း၊ဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်မေတ္တာနှင့်နူးညံ့ကြင်နာမှု၊စောင့်ရှောက်မှုအဘို့အဖန်တီးမှုမိန်းကလေးဖြစ်ကြောင်းရိုးသားစွာခွဲနှစ်ခုရှက်။ ငါနိုးသောအယူအဆငါလုပ်နိုင်တယ်။ ကတည်းကရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုနှစ်လိုဖွယ်ကျယ်ပြန့်ခြင်းနှင့်၊အားကြီးသောပခုံး၊အထောက်အပံ့အသက်လုံးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏၊ငါသည်လည်းအာမခံမေတ္တာနှင့်လေးစားမှု၊စောင့်ရှောက်မှု၊အာရုံကိုအကုန်အထိ။ ၏အသုံးအလိမ္မာနှင့်ဟာသကကကြိုဆိုပါတယ်။ ငါဖြစ်၏တစ်ဦးအဖော်အသက်တာ၌၊ငါ၏ဝိညာဉ်သည်တစ်ဖက်၊တစ်ဦးသောသူကိုအသုံးပြုသည်သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဿနာများကိုဖြေရှင်းဖို့သူတို့ကို။ ငါဖြစ်ချင်တစ်ဦးအပြိုင်အဆိုင်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၊ကာယဗလမယ်၊ဒါပေမယ့်သူတစ်ဦးဘူးဘာမှမစားခဲ့တဲ့ရေကန်မရှိကြောင်းဘာမှမ။ အျဖဴေရာင္ရြန္၊မကောင်းတဲ့အလေ့အထများ၊တရားဝင်ကွာရှင်းခြင်း၊အိမ်။ အငြိမ်၏သဘောသဘာဝ၊ပဋိပက္ခများ၊နှံနိုင်။ ငါဖြစ်ချင်တာထဲကသဘာဝအခုကစားအား၊ဦးဆောင်လမ်းပြတစ်ဦးကျန်းမာတဲ့လူနေမှုပုံစံစတဲ့။ ကျွန်မအထင်ဒါဟာကောင်းပါလိမ့်မယ်။ အသံ၏။ မကြောက်ပါဘူး။ သူတို့အဘို့အရှာဖွေနေနေတယ်ဒီတခါ -တစ်သက်တာနံပါတ်တစ်။ တူညီသောအရာဖြစ်ပျက်တိတ်တဆိတ်ကြောင့်၊တူ၏ခံစားရတယ်သည့်အမျိုးသမီးတစ်ဦး။ ငါတွေ့ဆုံရန်ချင်နှင့်အစဉ်မပြတ် အတူတကွရင်ဆိုင်ဖြေရှင်း။ အဘယ်သူမျှမထိုကဲ့သို့သောအရာတစုံတခုအဖြစ်တရားမျှတသည့်စာနယ်ဇင်းခန္ဓာကိုယ်အပေါ်အနည်းငယ်သင်ကြိုက်တတ်တဲ့လျှင်နှင့်ဆက်ဆံရေးနွေးထွေးအမျိုးသမီး။ ဒါကြောင့်မော်သို့မဟုတ်မော်စ။ လူမှုရေးအခြေအနေ-အဘယ်သူမျှမ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ချစ်လိမ့်မည်။ ကျွန်တော့်အတွက်၊ဤသဘာဝလူတန်းစားများ၊မှိုများနှင့်အသီး။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးပစ္စည်းများကိုအရောက်၊ပြဇာတ်ရုံ၊ရုပ်ရှင်ရုံ။ ထိုစိတ်ဓါတ်များကိုအတွက်၊ချက်ပြုတ်၊နေခဲ့သည်။ ကျွန်တော်ကြိုးစားမှဖြစ်ပြီးအကောင်းမြင်။ ဟုတ်ကဲ့။ ငါလိုလူကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ပါစေ။ လူတစ်ဦးအသက် ၅၅-၆၈ နှစ်၊မေတ္တာအသက်တာ၏၊အနက်၊၊လွတ်လပ်သော၊နိုင်နိုင်နင်းနင်းနှင့်အတူခက်ခဲအခြေအနေ၊သဘာဝအလျောက်ထောက်လှမ်းရေး၊ဘုံအကျိုးစီးပွား။ လူတွေအသက်အရွယ်၊ဒါပေမယ့်လည်းအပြည့်အဝတက်ကြွ၊မညီမဲ့။ ငါအရပ်ရှည်ရှည်နှင့်အထွား။ သငျသညျစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်၊သင်သည်ငါ့ကိုမြင်ပုံစံအတွက်ထည့်ပါ၊ပြီးတော့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားမဟုတ်။ အားလုံးရဲ့၊ေအာက္ထပ္၊ခရမ္းခ်ဥ္သီး၊။ လူဖတ်အတွက်ဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်။ ရှိသည်သောသူတို့အဘို့အလေးအနက်၊ခိုင်မာသောဆက်ဆံရေးကိုသင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ခံရ။ ငါအမည်ပါဝင်ပြီးမှတ်ချက်သို့မဟုတ်တုံ့ပြန်ခြင်းနှင့်ကူညီ။ ဤသည်များသောအားဖြင့်တကယ့်လူ့နိဒါန်း။ တောင်အားဖြင့်အမျိုးသမီးရဲ့ချန်နယ် လက်။ ရိုးသား၊လက်ဝဲလက်၌ပေးဆောင်လပ်ရက်။ တချို့ကနိုင်ငံကူးလက်မှတ်နှင့်ကာကွယ်ဆေးထိုး။ များအတွက်သင့်လျော် ၊ငါ့နေ့။ ဒီစကားလုံးက"အမေ"ဖြစ်သည်။ နှင့်မသုံးပါနဲ့။ မ ။ ထိုမိန်းမသည်၊ကျရောက်ရန်အဘို့အပိုထက် ၄၅ နှစ်။ ငါအမြည်း။ ငါမသိဘူး၊ခက်ရှင်းပြဖို့အဆိုပါတည်ငြိမ်အေးဆေးနှင့်ဖြစ်နိုင်။ ငါကမလိုအပ်ပါဘူး၊ဒါမှမဟုတ်ပင်ရိပ္မ်ားကိုအီးမေးလ်ပို့မှမင်္ဂလာဆောင်၊အထူးသဖြင့်ကတည်းကငါမေတ္တာ၌ကျသွားအရာ-ငါယူသင့်ထံမှအတွဲယာဉ်။သေချာအောင်သင်အနေနဲ့တက်ကြွ၊လှုပ်ရှားတက်ကြွ၊ဖက်ရှင်လူ၊တစ်ဦးချစ်စရာမျက်နှာ၊အဘယ်သူသည်ချက်ပြုတ်နိုင်မှာ.
၊မောင်း ၊သခွားသီးနှင့်အတူပြဿနာများအိမ္ရာမှပင်လယ်သခွားသီး၊ကြီးစွာသောဟာသက။ ရှိရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိဖြစ်ခြင်းအတွက်ပျင်းစရာ။ ကြၽန္ေ ၅၆ နှင့်ငြီးငွေ့၏ခင်ပွန်းဇနီး။ သေချာအောင်သင်ကြားနိုင်သည်။ အ ထားပြီး ၂၀၂၀၊ဆဲလမ်းလျှောက်။ အိပ်ရာဝင်သည်ပန်းနဲ့နိုးထ။ ငါဖြစ်ချင်တာတစ်ဇွန်း၊ငါဘာဖြစ်လိမ့်မယ်။ အဆိုပါဒုတိယအုပ်စုများ၏ပုံမှန်အမျိုးသမီးများပိတ်ထားသော်လည်း၊သူတို့သည်ကြပြီမဟုတ်၊အတွေ့အကြုံသည်အဘယ်အရာကိုရှိသည်ဖို့ကြိုက်၊ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမသန်။ ကျွန်တော်စဉ်းစားအဖြစ်အတူတူငါပြုမည်။ ကျော်အမျိုးသားများ ၄၅-၆၀ သက်အရွယ်အနှစ် လူနေသောမသန်စွမ်းများအတွက်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းပြချက်များအတွက်မြို့နှစ်ပေါင်းများစွာအတွက်မသန်စွမ်းများအတွက်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းပြချက်များအတွက်။ မည်သို့နားလည်ခြင်း။ ၁၆၃-၅၉။ အဘယ်သူမျှမအိုးအိမ်သို့မဟုတ်ရန်ပုံငွေ။ စုလိုက်အပြုံလိုက်မီဒီယာ။ နှိမ့်ချလိမ့်မည်။ ကဏန်းလုပ် ။ အဘယ်သူမျှမနာကျင်မှုကိုအတွက်။ သာငါ့အအခမဲ့အချိန်၊ကျွန်မလိုငါးကောက်၊မှိုများနှင့်အသီးအတောအတွင်းနွေရာသီအတွက်၊တစ်ဦးစက်ဘီးစီးခြင်း၊သွား၏သဘောသဘာဝအမြို့၊ဖတ်ရှု၊နားထောင်ဖို့စုံထောက်ပုံပြင်၊တေးဂီတ၊ငါ့သမီးနဲ့ငါသည်လက်ဝဲ-လက်။ ငါစဉ်းစားနေတာက။ ငါစဉ်းစားနေတာကအလုပ်အတွက်ဆက်သွယ်ရေးနှင့်လေးနက်သောဆက်ဆံရေးကိုနှင့်အ ၅၂-၆၄-နှစ်အရွယ်ယောက်ျားနှင့်အတူရုရှားထံမှအနီရောင်မျက်စိအပေါ်အဝတ်စုတ်၊ဒါပေမယ့်တစ်ဦးအရက်အကြမ်းဖက်၊တစ်စိတ်ရင်းမှန်နှင့်ယုံကြည်ကိုး ၁၇၀ စင်တီမီတာအရပ်ရှည်ရှည်။ အဆိုအရ၊ငါ့နိဂုံး၊ငါအလိုကိုဖြည့်ဆည်းဖို့သင်နှင့်အတူဖြစ်၏။ သုံးနက္ေရာင္ဗုံးကြဲလေယာဉ်ချဉ်းကပ်နေကြတယ်။ ဓာတ်ပုံကနေစစ်တမ်း။.
يرجع تاريخها الرجال في أنغيلا: الاشتراك مجانا.
အသက်ရှင်သောဗီဒီယိုချက်တင် မြန္ဂိုအမ်ဳိးဗီဒီယို ဗီဒီယိုစကားပြော ၁၈ အွန်လိုင်းထုတ်လွှင့် ဗီဒီယိုချက်တင်နှင့်အတူမိန်းကလေးငယ်များအခမဲ့မရှိပါ အခြားရွေးချယ်စရာ ဗီဒီယိုချက်တင်စုံတွဲများ ချက်တင်ကစားတဲ့အြန္လိုင္း ၁၀၀၀ သင့်ဖုန်းမှအခမဲ့ လိင်နှင့်ချိန်းတွေ့မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဗီဒီယိုချက်တင် ၁၈ မပါဘဲမှတ်ပုံတင်ခြင်း